SomaliTalk.com » DOORKA HAWEENKA SOOMAALIYEED
Somaliya goormey nabad noqaneysaa ? waa yaabe cunugii dhashay 20 sano ee ugu danbeysay, tarbiya malaha,lamana tarbiyay karo! waayo waligiis ma arkin nidaam, kala danbeyn, nabad la aan darted ka jirta Soomaaliya.
waxay ila tahay dadka bananka jira oo kaliya ayaa og ama dareemi kara baahida uu wadanku leeyahay, hadana waxaad moodaa iney nabadu ku jirto gacanta inta ku nool gudaha wadanka Hadaba anigoo ah hooya soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa haweenka soomaaliyeed meel walba ooy joogaanba gaar ahaan gudaha wadanka in ay ka dhiidhiyaan qaska ka jira wadankooda hooyo.
walaalahayga soomaaliyeed, gabdhahayaga somaaliyeed hooyooyinka soomaaliyeed, walaalyaal aan iskaashano isku mawqif ahaano, isku duubnano, bal aan tijaabino dowrka hooyanimada, waxaan filayaa kaalinteena haween nimo inaan gabnay.
Dhibkii waa dhamaan la,yahay, waayo culimadii firqo firqo ayay u kala baxeen, odayaashii beel beel ayay qeyb sameen, dhalin yaradii dhaqaala ayaa lagu badashay, waxgaradkii maskaxdaa laga xadey, lacag ayadoo loo adeegsanayo.
Hadaan nahay haweenka soomaaliyeed, dadka dhibkan wada aan qabano waayo anagaa wada dhalnay, nala dhasheen, u dhaxnaa nadhaleen..
Walaalayaal aduunka meelwalba oon joogno dhimanay walaalayaal aan iska qabno umadaan Baabiisay jiritaankeena dhaqankeenii waa labadaley, sharafteenii weyluntay, magacii wadankeena waa halaabay.
Walaalayaal cidd kale yaynaan ka sugin wax qabad, aan qabano dadka dhibka wada, yayana fiirinin, wadankan lagu noolaadeen, si sharaf iyo qiimo leh, hadeyna haweenku dowrgooda ciyaari lahayn.
Walaalayaal hadaan haween soomaali nahay, waan awoodnaa wax walba, haweenku waa haweenkii libaax soo jeeda Tin ka soo gaysay waa qiso diini ah oo caan ah, haweeynku waa qofkii ugu horeeyay oo Islaama, haweenka kaalintooda dunida lama soo koobi karo, waa asaaska nolosha oo idil, waxaan aaminsanahay ka hooyo soomaaliyeed in dowrkeena aan gabnay, ma waxaan celin weyney Aabaheen macaan ee na dhalay, walaakeen aan koriney wiilkeena, kaan u dhaxnay, maxay kula tahay intaas oo dhan. Ma celin karno!! waan celin karnaa, mid walba aan ku xukuno inuu tanaasul la yimaado ayagoo anaga nageeya waxaan aamin sanahay inaan guuleysaneyno, aan wadno halganka wacan kaas oo cad waana guuleysanaynaa inshaa allaah.
Jaale Madaxweyne maalintii lagu doortay ilaa hadda maxaad soo kordhisay? Jaale wasiiir ilmahaada intaad meel nadab ah geysatay misana mushaar xaaraan ah cuntaa? yaad xil u haysaa?
Jaale Baarlamaan yaad shaqo u haysaa? ummadiiba baa’ba’daye maad isku keentid dadka waad awoodaaye?
Jaale qabqable ama oday dhaqameed maxaad u taageereysaan qaladka adoo ujeeda, u soo noqo kitaabka allaah iyo sunada nabiga ( N.N,K)
Jaale dhalinyaro maskaxdii i miyay inaga luntay, 20 sano nabad la ,aan, qarax, faqri, qabiil, muruqiiniii wuxuu noqday beec! dhaliyarooy dib u soo noqda ka fa iideeysata , dhalinyaranimada.
Jaale ardayga qaxa wax ku bartay aana arkin nidaam waligiis misnaa adaa lagaa rabaa inaad wadanka toosiso ma awaoodaa jaale arday?
Marwo ama hooyo adaa u danbeeya qoraal ahaan laakiin ficil ahaan adaa u horeeya waayo, Madaxweynaha adaa dhalay, Wasiirka adaa dhalay, baarlmaanka adaa dhalay qabqablayaalka dagaal adaa dhalay, Wadaadada adaa dhalay dhalinyaradda iyo ardeyda ayeeyaa u tahay. Qabo intaas waad qaban kartaayee.
Qore: Hooyo Sooomaaliyeed Muna Diirshe